Ukunyuka kwinqanaba eliphezulu kwi-Oklahoma
Midlalo Kwiintaba eziphakamileyo
Inkcazo yeNdlela ye-4,973-foot Black Mesa
I-Peak: i- Black Mesa
Ukuphakama: 4,973 iinyawo (1,516 kumitha)
Indawo: eNtshona Oklahoma; Iimitha ezili-1,299 empuma yoMda weMexico. Kukho kwiCimarron County.
Uhlobo: Mesa de Maya
I-GPS idibanisa : 36.93185 ° N / 102.99737 ° W
Ubunzima: Iklasi 1. ukuhamba ngeendlela ezilungileyo.
I-Trailhead Elevation: 4,319 iinyawo
Ukuphakama kweNkunzi: 654 iinyawo
Uhambo olujikelezayo: 8.4 miles. 4.2 ngeekhilomitha enye.
Iimephu: I- USGS Quads: Kenton
Ukumisa amatende kunye nokuLungisa: Ikampu efuphiweyo i-Black Mesa State Park. Ukuhlala kwibhede elisondeleyo kunye neendlovu zokungena kunye neekrensi zokuqeshisa.
IiNkonzo: Iinkonzo ezikufutshane, kuquka i-gesi kunye nokutya, kuseBeise City, 37 miles ukuya empuma-mpuma. Iinkonzo ezincinane kwiKenton.
I-Black Mesa, kwii-4,973 iinyawo (1,516 kumitha) ngaphezu kwezinga lezilwandle, liphezulu kwi- Oklahoma . I-Black Mesa yindawo ephakamileyo ephezulu yaseburhulumenteni e-United States. U-Black Mesa, nangona kunjalo, akanalo isingqungquthela e-Oklahoma. Ingingqi ephakamileyo yombuso nje yindawo ephakamileyo e-Oklahoma kwi-vol-mesa ye-vol-mesa engama-45-miyela, ehamba ngokukhawuleza yenyuka ukuya ngasenyakatho-ntshona esuka e-Oklahoma ukuya kwikhoneni elingasempuma ye-New Mexico ukuya kwi-Black Mesa kwi-summit 5,712 kwi-Colorado. I-Black Mesa idibanisa kwiColorado ene-6,840-foot-high-Mesa de Maya, intaba ephakamileyo.
UMesa oqulunqwe yi-Lava Flow
I-Black Mesa yi-mesa ebomvu e-basalt-capped eyayiyintsikeni yeentlambo ngaphezu kweebhiliyoni ezimbini kwiminyaka edlulileyo. I-lava esuka kwi-volcanic winds ukuya ngasenyakatho-ntshona kwiColorado namhlanje i-Mesa de Maya iqhutywe ngokukhawuleza okukhulu, isehla phantsi kwintlambo ngaphambi kokuqiniswa kwi-basalt yanamhlanje.
Ukutshatyalaliswa kwamanzi kwandula kuhlaselwa emacaleni omlambo, okwakhiwa ngamatye angqinileyo , kodwa washiya i- basalt engakhuselekanga ukukhuphuka kwamanzi njengenqwelwana engaphezulu kwendawo yeCriar Creek neCimarron River. Ngaphantsi kwee-capal basalt zincinci zetyala le-sandstone kunye ne-shale, ezikhuselekile ekukhuliseni kwe-cap ephezulu.
Icandelo le-Oklahoma laseMnyama iMesa eliquka indawo ephakamileyo yommandla iimitha ezili-1,9 ubude kwaye ihamba ukusuka kwisiqingatha seekhilomitha ukuya kwiiyure enye.
I-Black Mesa iLondolozo lwendalo
I-Black Mesa, ephakama ngamanci angama-600 ngaphezu kweendlambo ezijikelezileyo, ikhuselwe kwi-1,600-ekre e-Black Mesa Nature Preserve kwaye ilawulwa yiSebe laseKlahoma lezoKhenketho noLonwabo. Ulondolozo luvulekile usuku nosuku ukusuka ekuphumeni kwelanga ukuya kutsho kwelanga. Akukho nkampu okanye ukupaka ubusuku bunye buvunyelwe. Inkampu e kufuphi nayo ikude ezili-15 kwi-Black Mesa State Park. Azikho iinkonzo ezikuMnyama eMesa. Ivenkile ebizwa ngokuba yi-Kenton Mercantile Store, ebizwa ngokuba yi-Merc, ivalwe ngoku.
I-Beta ye-Black Mesa yeTeta
Indawo ephakamileyo yaseKlahoma kwi-Black Mesa ifikeleleke kwi-Trail Mesa ye-Black Mesa engu-4.2-mile, ewela i-flat plane kumntla we-mesa ngaphambi kokunyuka kweentlambo zayo ezisenyakatho ukuya kwi-mesa ephezulu. Umzila ulula ukulandela kwaye utyunjwe kakuhle ngamanqaku amathandathu. Vumela ezintathu ukuya ezintlanu iiyure ukunyuka kwindawo ephakamileyo kwaye ubuyele kwinqanaba lomzila. Yilungiselele ehlobo ukushisa okuphezulu, ilanga elitshisayo, umthunzi omncinci, kunye nexesha elidlulileyo lemvula ngokuduma kwelanga . Khupha iziphuzo ezininzi zamanzi nezigesi njengeGatorade okanye i-Powerade kwaye unxibe ingxowa ukuze umthunzi ubuso bakho nentloko.
Ebusika ukunyuka kungabanda kwaye kuphephe; sigqoke ngokufudumele . Musa ukurhoxisa umzila kwinqanaba lokutshintshela okanye kwenye indawo ukunciphisa ukukhukhula.
Gcina iliso ngexesha lokufudumala kwimozulu ye-rattlesnakes, enokufunyanwa phakathi kweengcingo zamatye okanye phantsi kweentsika ezikufutshane. Ukuba uhlangabezana ne- rattlesnake , buyela ngokukhawuleza. Musa ukubulala iinyoka ngenxa yeli likhaya kwaye zikhuselwe kulondolozo.
FUNDA I-MESA ENTSHA OKUHLELELEYO 325
Ukusuka eKenton, e- Oklahoma, idolophana encinane (abantu abangama-17) nje empuma yoMda weMexico, uqhube empuma kwi-Oklahoma Highway 325 ngeekhilomitha ezingama-0.5 uze wenze ukuhamba ngakwesobunxele kwindlela yokuqala, ephawulwe "I-Sum Mesa." Ukusuka empuma, ukuqhubela ngasentshonalanga ukusuka kwiSixeko saseBoise ukuya ku-OK 325 ukuya kwii-37 ukuya kwimizuzu efanayo. Ukuhamba ngeekhilomitha ezili-5 ukuya kwindlela eya kwi-Black Mesa Nature Ukugcina indawo yokupaka ngakwesobunxele.
I-Black Mesa iyilwa lombala omnyama olusempumalanga kumzantsi-ntshona wendawo yokupaka nasentshonalanga kwendlela yokufikelela.
UKUKHALA UMTSA TRAIL
Qalisa kwiNtaba yeMzila ye -Black Mesa ngasentshonalanga kwindawo yokupaka (i-GPS: 36.957154 N / -102.957211 W). Ukunyuka ngasentshonalanga kunye nomgwaqo omdala ogqityiweyo kwiphondo elivulekileyo elingaphandle kwinqanaba elingasentla kummandla ocacileyo we-mesa. Kukho imibono emihle ye-Black Mesa kwakunye ne-mesas eseduze kunye ne-buttes ephakama ngaphaya kwentlambo yaseCarrizo Creek.
Emva kwe-2.2 iikhilomitha umzila wenza uguquko olubukhali (GPS: 36.95092 N / -102.991305 W). Landela umzila, oza ufikeleleke kwaye uzuke njengama-switchbacks kuwo ubuso obusentla be-Black Mesa. Emva kokunyuka malunga neenyawo ezimashumi ama-600, ufikelela kwi-mesa phezulu kwincingo yocingo olubiweyo kunye neqoqo lamagunya angaphezulu kwinqanaba lomntla we-jutting promontory.
Qhubela kumzantsi-mpuma ukuya kwelinye i-mile kwindlela ekhangelekayo kwi-mesa-top. Ekugqibeleni uza kubona isikhumbuzo se- granite esineziikubhite ezilisibhozo esibonisa indawo ephakamileyo yase-Oklahoma (i-GPS: 36.931859 ​​N / -102.997839 W) malunga neekhilomitha ezili-km. Ukuba uyingxondorha yamatye, zama i- problem boulder uze uhlale kwi-obelisk ecacileyo ukuba ube phezulu kwi-Oklahoma. Ibhokisi ye-ammo ecaleni kweso sikhumbuzo inokubhala apho ungabhala khona igama lakho kunye naluphi na umboniso othakazelisayo malunga nokunyuka kwakho okanye usuku. Buyela e-4.2 iekhilomitha ngaphaya kwendlela yokupaka.
K2: Indlela yokunyuka indlela ye-Abruzzi Spur Route
I-Nat Parbat: I-Nine yeNtaba ephakamileyo kwiNhlaba
Ubomi kunye Nezobugebengu Zombulali Oyingqungquthela uJeffrey Dahmer
UkuBhaliswa kwabaBini kwiSikolo esiphakeme kunye neKholeji
Kubaluleka koqeqesho loTitshala oluphumelelayo